Fahatokisana - Foton Motor Group Co., Ltd.
FOTON dia mankafy ny anaram-boninahitry ny orinasam-piara voalohany ao Shina izay miasa amin'ny R&D amin'ny fiara fitateram-bahoaka, ny mpamokatra fiara fitateram-bahoaka voalohany izay ampiasain'ny solika hidrogen sy ny fiara miaraka amin'ny kilometatra fiasa lava indrindra eto an-tany.
Vokatra energie vaovao
Ny fiara mifamezivezy rehetra, anisan'izany ny fiara mpandeha, bus, kamio ary SPV. Ny fiara fitateram-bahoaka AUV manomboka amin'ny 5.9m ka hatramin'ny 18m dia vahaolana azo antoka, azo antoka ary maintso mankany amin'ny fitaterana mpandeha, mandeha sy mitsidika. Ny fivarotana fiara maintso no laharana voalohany amin'ny indostria nandritra ny taona maro nifandimby. Tamin'ny Mey 2016, nahazo baiko 100 ny FOTON izay ampandehanan'ny sela solika hidrogen, no betsaka indrindra manerantany.
TEKNOLOGIANA ENERGY Vaovao
FOTON dia afaka manatanteraka R&D an'ny teknolojia fototra 8 an'ny fiara angovo vaovao ao anatin'izany ny fampidirana powertrain, fonosana bateria, fanaraha-maso moto ary rindrambaiko fanaraha-maso ny fiara ary nangataka patanty 1.032 mifandraika ary manana teknolojia manana patanty 70% mahery. FOTON dia nahomby tamin'ny famolavolana fiara 32-bit, ny rafitra fitantanana bateria ary ny rafitra fanaraha-maso môtô, izay nampiharina tamin'ny vokatra isan-karazany, anisan'izany ny fiara fitateram-bahoaka sy fiara fitaterana vaovao. Ny R&D tsy miankina mahaleo tena dia ahafahan'ny FOTON manana teknolojia fototra an'ny rafitra fanaraha-maso bateria, motera ary elektronika hahafeno ny fepetra takiana amin'ny hafainganana, fiakarana, fitsangantsanganana ary famerana ny faharetany.
FOTON dia nanambola vola mihoatra ny RMB 23 miliara ary nanangana zavamaniry maoderina manerantany sy andalana famokarana mandeha ho azy mandritra ny 4 taona mifototra amin'ny foto-kevitry ny famoahana aotra, tsy misy fifandraisana sy mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny haitao fanafarana mandeha ho azy, nomerika ary manan-tsaina.
Tsipika fanaronana robot
Tsipika famokarana herinaratra bus 13.7m
Tsipika famonoana mandeha ho azy
Tsipika fivorian'ny robot